के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस – Sandesh Press
के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस
May 23, 2021 391
Prevनेपालमा सेनिटाइजर कम्पनिले मान्छे मा’र्दै, प्रहरीले हान्यो छापा हो’सियार हुनुहोस्(भिडियो)
बन्जीजम्पका क्रममा डोरी चुँडिएपछि ८० फिट तल खसेर महिलाको मृत्यु